व्यङ्ग साहित्य Archives - पेटबोली ...!
व्यङ्ग साहित्य Archive
२०३६ सालमा जनमत संग्रहको प्रचार प्रसार भैरहेको थियो। सुधारिएको पञ्चायत कि नसुध्रेको प्रजातन्त्र भन्नेमा व्यापक तयारी थियो। पञ्चायती शासकहरु जोडबलले पञ्चायत सुधार्छौं भन्दै उफ्रिरहेका थिए। म जन्मेकै थिइनँ। उबेलाका जिल्ला सभापति थिए। बडेमानको भुँडी भएका। उनी एउटा सेतो घोडा चढ्थे, हट् घोडा हट्। ती सभापति हाम्रो घरमा आए। घोडाबाट	Tweet
‘फेब्रेवरी’ महिना प्रेमको महिना हो रे ! माया गर्ने फुर्सद नहुनेहरूले जे भने नि भयो। नत्र मान्छे थोडी कुकुर हो र, माया गर्न महिना कुर्नू ! कुकुरको पो कहिल्यै काम नि हुँदैन फुर्सद नि हुँदैन र कार्तिक महिनामा फुर्सद मिलाएर ‘प्रणय दिवस’ मनाउँछन्। मान्छेको सँधै काम, सँधै	Tweet
अचानक राती चट्याङ् परेजस्तो आवाज सुनिन्छ। कालो बादल मडारिरहेकोजस्तो, ठूलै उथलपुथल हुन लागेजस्तो, छातीमा केही गह्रौं वस्तुले थिचेजस्तो। ऐठनले ऐं ऐं भएको देखि सीता माते जागा होइबक्स्यो। होटलको कोठामा छामछाम छुमछुम गरेपछि बिजुलीको स्वीच फेला पारिबक्स्यो। बत्तीको धिमा प्रकाशमा माताले स्वामीलाई हेरिबक्सनुभयो।	Tweet
यो मोबाइल भन्ने जिनिशको जति फाइदा छ त्यति नै बेफाइदा। कहिलेकाहीँ दुई तीन दिनसम्म फोनको घण्टी नै बज्दैन। अनि घरीघरी फोन हेर्नुपर्छ- स्वीच अफ पो छ कि वा बिग्रियो कि भनेर। कहिले भने वाक्कै लाग्दो गरी बज्छ त्यो पनि बिनाकाममा। ब्लफ कलका त कुरै नगरौं। यहाँ मेरो	12	सामाजिक सन्जाल	अनन्त कोइराला